Fikarohana : nivoaka ny boky momba ny safiotra teto Imerina | NewsMada
Fikarohana : nivoaka ny boky momba ny safiotra teto Imerina
Avy aiza ny Malagasy? Tompon-tany sa mpihavy?, sns. Raha mbola maro tahaka izany ny fanontaniana hitadiavam-baliny, efa misy ny mpikaroka namoaka ny valim-pikarohany. Na tsy ny Malagasy rehetra aza no voaresaka, ilaina ny tahaka itony…
Mitohy ny fikarohana mikasika ny tantaran’i Madagasikara, ireo foko samihafa, sns, na efa maro aza ny fahalalana, navoaky ny manam-pahaizana mpikaroka, mikasika ireo rehetra ireo. Anisan’ny manaitra ary heverina fa tokony hahaliana, indrindra ho an’ny mpianatra, ohatra, ny fivoahan’ny boky mitondra ny lohateny hoe: “Etre métis en Imerina au XIXe-XXe siècles“, izay azo adika koa hoe “Ny safiotra teto Imerina tamin’ny taonjato faha-19 sy faha-20”. Nanoratra izany boky izany i Violaine Tisseau, mpikaroka, manam-pahaizana « doctorat » mikasika ny tantara, nivoaka tao amin’ny oniversite Paris Diderot, mpikaroka eo anivon’ny CNRS* ary mpikambana ao amin’ny Institut des mondes africains (Imaf).
Mbola manohy ny fikarohana, eto Madagasikara, ity manam-pahaizana frantsay ity ary mifantoka betsaka amin’ny tantaram-piarahamonina izany. Azo lazaina ho anisan’ny voka-pikarohany ny voarakitra ao anatin’ity boky ity. Fantatra fa tranga nandritra ny fotoan’ny fanjanahantany ny niantefan’ny fanadihadiana, saingy nohadihadiny ihany koa ny talohan’ny nahatongavan’ny mpanjanaka mba hanehoana hoe tamin’ny fomba ahoana ny nametrahan’ny fanjanahantany ny “sokajin’olona” safiotra na metisy. Voalaza ao anatin’ny boky ihany koa ny tohin’izany mandraka ankehitriny.
Efa tamin’ny volana mey teo no navoaky ny trano fanontana Karthala ity boky, nosoratan’i Violaine Tisseau, ity. Hisy kosa ny fampahafantarana azy, izay ataon’ny mpanoratra, ny 30 novambra izao, any amin’ny foiben’ny Inalco** any Frantsa.
Asa goavana ny fikarohana toy ity nataon’i Violaine Tisseau ity. Matetika ny vahiny hatrany no manoratra ny tantaran’i Madagasikara. Manana mpikaroka anefa ny Malagasy, saingy mbola olana hatramin’izao ny tsy fanomezan-danja ny fikarohana eto Madagasikara. Tsy ny sehatry ny kolontsaina ihany fa saika ny sehatra rehetra mihitsy, itrangan’izany avokoa.
*CNRS: Foibe nasionaly momba ny fikarohana siantifika (any Frantsa)
**Inalco: Institut national des langues et civilisations orientales.